“(၉)ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ အရင်းအနှီးစျေးကွက်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့ (9th Mekong Capital Markets Cooperation-9th MCMC) အစည်းအဝေး
မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်မှ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပပြုလုပ်သည့် “(၉)ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ အရင်းအနှီးစျေးကွက်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့
(9th Mekong Capital Markets Cooperation-9th MCMC) အစည်းအဝေး
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်
မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်မှ အိမ်ရှင်နိုင်ငံ အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပြုလုပ်သည့် “(၉)ကြိမ်မြောက်မဲခေါင်ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ အရင်းအနှီးစျေးကွက် များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ (9th MCMC) အစည်းအဝေး” ကို ၂၅-၃-၂၀၁၉ ရက် တနင်္လာနေ့၊ နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် သဘာပတိအဖြစ် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ဆောင်ရွက်ပြီး သဘာပတိက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် မဲခေါင်ဒေသအတွင်း အရင်းအနှီး စျေးကွက်များ၏ အတွေ့အကြုံများနှင့် ဗဟုသုတများမျှဝေဖလှယ်ရန်နှင့် စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်၍ မဲခေါင်ဒေသဆိုင်ရာ အရင်းအနှီးစျေးကွက်ကြီးကြပ် သူများနှင့် မူဝါဒရေးရာချမှတ်သူများ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မဲခေါင်ဒေသ ဆိုင်ရာ အရင်းအနှီးစျေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင် တည်ထောင်ပြီးသည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှစ၍ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပပြု လုပ်သည့် MCMC အစည်းအဝေးများသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဖနွမ်းပင်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၈) ကြိမ်မြောက် MCMC အစည်း အဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်က MCMC အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအဖြစ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံစုံပါဝင်သော နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခု (၉) ကြိမ်မြောက် MCMC အစည်းအဝေးအား မြန်မာနိုင်ငံမှ ပထမ အကြိမ် အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့် ရရှိခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ “အရင်းအနှီးစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး လတ်တလော ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ တင်ပြ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံအား မျှဝေခြင်း၊ ၂၀၁၉
ခုနှစ်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည့် အစီအစဉ်အား ဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေး၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြ ပါသည်။
အဆိုပါအစည်း​အဝေးသို့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်ဝင်းနှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ၊ MCMC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်တို့မှ အကြီးအကဲများနှင့် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယခုကျင်းပသည့် (၉) ကြိမ်မြောက် MCMC အစည်းအဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ပထမဆုံး အကြိမ် အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် မဲခေါင်ဒေသဆိုင်ရာ အရင်းအနှီးစျေးကွက်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့် “We help! We share! We benefit together!” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်နှင့် အညီ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများအချင်းချင်း အတွေ့အကြုံများ မျှဝေခြင်းဖြင့် အရင်းအနှီးဈေးကွက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတူတကွ လက်တွေ့ကျကျ ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။